Tue, Jul 14, 2020 at 12:42am
एजेन्सी, २३ जेठ उत्तरी जर्मनीका निल्स होगेल नाम गरेका एक जना पूर्व नर्सले उत्तरी जर्मनीको दुई अस्पतालका ८५ जना बिरामीको हत्या गरेको स्वीकारेका छन् । उनकाे स्वीकाराेक्तिपछि अदालतले उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । ‘४२ वर्षीय निल्स होगेलको हत्या काण्ड हेर्दा मानिसको दिमागले सोच्नसक्ने भन्दा बाहिरको कुरा जस्ताे लाग्छ’, न्यायाधीश सेबेस्टियन ब्यूहर्मनले भनेका छन् । यसअघि दुई जना बिरामीको हत्या गरेको..
एजेन्सी, २३ जेठ । यो संसारमा पहिला कुखुरी आई कि अण्डा आयो ? यो प्रश्नले आजसम्म पनि धेरैलाई रिंग्याइरहेको छ । कसैले पनि यसको जवाफ दिन सकेका छैनन् । तर अहिले आएर वैज्ञानिकहरूले यसको जवाफ पत्ता लगाएका छन् । शेफील्ड र वारविक विश्वविद्यालयले पहिले कुखुरी आएको दाबी गरेका छन् । विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानबमोजिम ओभोक्लाइडिन नामक प्रोटीनबाट अण्डाको खोल बनेको हो र..
काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट आयात गर्न थालेको विद्युत् परिमाण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष भारतबाट १८ अर्ब ४१ करोडको रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २१ अर्ब पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । चालू आर्थिक वर्षको १७ जेठसम्म १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए..
काठमाडौँ, २३ जेठ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले मंगलबार इटहरीका पत्रकार विराट अनुपमलाई फोनमा धम्की दिए, ‘तेरो नाकको हड्डी भाँच्न एक करोडको घडेरी राखेको छु ।’ यो धम्कीबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएपछि न्युज–२४ का पत्रकार रवि लामिछानेले चौधरीलाई टेलिफोन अन्तर्वार्तामा सोधे, ‘मेयरसाब, तपाईंले त पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न एक करोड छुट्ट्याएको छु भन्नुभएछ नि ?’ जबाफमा चौधरीले भने,..
काठमाडौँ, २२ जेठ । घर कस्तो छ भन्ने बुझ्नका लागि पहिले ढोकाबाहिरबाट भित्र छिर्नुपर्छ । भित्र नछिर्दै देखिने भनेको बाहिरी आवरण हो । आवरण मन परेमा भित्र छिरौ–छिरौ लाग्न सक्छ । त्यसैगरी मनभित्र छिर्ने मुख्य ढोका भनेको गेटअप हो । जसले कसैलाई सजिलै आकर्षित गर्न सक्छ । दोस्रो कुरा भनेको उसले गर्ने व्यवहार हो । अरुको भलो चिताउने, सहयोगी भावना भएको,..
एजेन्सी, २१ जेठ । दुनियाँमा योगा गर्ने तरिका विभिन्न खालका छन् । हुँदाहुँदा मानिसहरुले अब योगा गर्नका लागि जनावरको समेत सहारा लिन थालेका छन् । अमेरिकामा अहिले बाख्रासँग योगा गर्न थालिएको छ, जसलाई मानिसहरु गोट(बाख्रे) योगा भन्छन् । अमेरिकाको ओरेगनमा पछिल्लो समयमा एउटा ट्रेण्ड चलेको छ । त्यहाँ बाख्रे योगा अर्थात् गोट योगा लोकप्रिय बनिरहेको छ । बाख्रे योगाको बारेमा सुन्दा अचम्म..
काठमाडौँ, २० जेठ । भारतको राजस्थानमा एउटा यस्तै निकै अनौठो परम्परा रहेको छ । राजस्थानको एउटा समुदायमा यस्तो परम्परा छ, जहाँ बिहे नहुने पुरुषमाथि जोडतोडसँग कुटपिट गरिन्छ । राजस्थानको जोधपुर सहरमा उक्त परम्परा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । जसअनुसार जब कुनै युवकको बिहेमा कुनै प्रकारको बाधा उत्पन्न हुन्छ वा बिहे हुन सक्दैन, तब त्यस्तो युवकलाई उसका घर परिवारले रामधुलाई गर्दछन् । आफ्नो बिहे नभएर..
एजेन्सी, १९ जेठ भारतमा प्रेमीकाको श्रीमानबाट बच्न पाँच तलाबाट हामफाल्दा एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ। हातै दक्षिण दिल्लीस्थित तुगलकाबादको कम्पनीमा कार्यरत एक व्यक्ति कामबाट घर फर्किए। प्राय ८ घन्टा काम गरेर घर फर्किने उनी त्यसदिन चाँडै घर फर्किएका थिए। तर उनी जब घर फर्किए, उनकी श्रीमती प्रेमीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिइन्। ती व्यक्तिले श्रीमतीलाई २ झापड हिर्काए र हतार हतार ढोका लगाइदिए। श्रीमती र उनका..
काठमाडौं, १९ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा कुर्सीबाट लडेको भन्दै ज्यान जोगाइ दिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'म चार पटक भयो यहाँबाट लडेको', अधिकारीले कुर्सीको सिट देखाउँदै भने, 'अहिलेसम्म दुर्घटना भएको छैन, बाँचिएको छ। कति पटक भन्नुपर्ने हो, संसद सचिवालयलाई ?’ उनले संसदबाट त्यस्ता कुर्सी हटाउन माग गरे । 'आगामी दिनमा यस्तो कुर्सी नराखियोस्', उनले भने, 'धराप भयो। ज्यान..
एजेन्सी, १८ जेठ युवाहरु पब्जी भनेपछि कतिसम्म ‘क्रेजी’ हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा नयाँ भिडियो हेरियो भने थाहा पाइन्छ । जुन भिडियो अहिले टीकटकमा भाइरल नै बनाइएको छ । बेहुलीको साथमा जग्गेमा बसिरहेको एक युवकले आफ्नो मोबाइल फोनमा पब्जी खेलिरहेको छ । फूलमाला र नयाँ कपडामा बेहुलीको साथमा जग्गेमा बसिरहेको युवक पब्जी खेलिरहँदा बेहुली भने उसैतर्फ हेरेर मौन छन् । उक्त भिडियो झण्डै ५..
काठमाडौँ, १८ जेठ । सन् २००७ को विश्वकप वेस्ट इन्डिजमा आयोजना भएको थियो । त्यति बेला पाकिस्तानी टोलीका प्रशिक्षक थिए, बब उल्मर । कुनै समय उनी इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी र दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक पनि थिए । तर, सन् २००७ को विश्वकपका क्रममा उनको दुःखद निधन भयो । उनको रहस्यमयी निधनले लामो समयसम्म विश्व क्रिकेटलाई तताएको थियो । मार्च १७..
काठमाडौँ, १८ जेठ । अमेरिकी राज्य भर्जिनियामा बन्दुधकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। एक सरकारी भवनमा गोली चल्दा अन्य ६ जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सोही कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीले गोली चलाएको भर्जिनिया प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणकारीको परिचय खुलाइएको छैन, प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा आक्रमणकारीको पनि ज्यान गएको छ। ६ जनामा प्रहरी अधिकारी पनि घाइते छन्। गोली..
म्याग्दीको बेनीमा भेटियो २५० वर्ष पुरानो दमाहा
म्याग्दी, १७ जेठ म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं ५ पुलाचौरको पुरण्यमा २५० वर्ष पुरानो ऐतिहासिक दमाहा भेटिएको छ । पुरण्यका इन्द्रबहादुर दर्जी (साइलो) को घरमा उक्त दमाहा भेटिएको हो । पुला क्षेत्रमा शताब्दीयौँ पहिलाका बाजा रहेको भन्ने जानकारी पाएपछि ती बाजाको खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा स्थानीय बुद्धिजीवी तथा शिक्षक शिव बानियाँले खोजी गर्दै जाँदा इन्द्रबहादुर दर्जीको घरमा सो दमाहा भेटिएको हो । “मैले..
भविष्यमा हुने घटनाप्रति हाम्रो शरीरद्वारा पहिले नै आशंका ! कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ?
काठमाडौँ, १७ जेठ । हिन्दू शास्त्रमा विभिन्न अंग फर्फराउँदा हुने घटनाबारे लेखिएको छ । मानिसको शरीर अन्य प्राणीको तुलनामा निकै संवेदनशील हुन्छ । यही कारण भविष्यमा हुने घटनाप्रति हाम्रो शरीरले पहिले नै आशंका गरिरहेको हुन्छ । शरीरको विभिन्न अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने घटनाबारे जानकारी दिन्छ । वर्तमान समयमा यी कुरा विश्वास गर्न निकै कठिन हुने भए पनि यसलाई पुरै बेवास्ता गर्न सकिन्न..
काठमाडौँ, १५ जेठ । जेनोपस भनिने यो अफ्रिकी भ्यागुतो सब सहारा क्षेत्रको पानीमा दशौं लाख वर्षदेखि पाइन्थ्यो । सन् १९३० को एक दिन एकजना ब्रिटिश वैज्ञानिकले त्यसमा पिसाबको सुई दिने निर्णय गरे । ल्यान्सलट हगबेन एकजना जनावर विज्ञ थिए । उनी जनावरहरूमा विभिन्न वस्तुहरू खासगरि हर्मोनको सुइ लगाउने रुची थियो । त्यसरी सुई हाल्दा ती जनावरले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने हेर्नु उनको..
छोरोले आमालाई घर ल्याउदा श्रीमतीको प्रश्न - दिमाग त सहि छ हजुरको ?
काठमाडौं १४ जेठ एकदिन श्रीमान घर आउँदा निक्कै अबेर भएछ । अनि घर आएर ढोकाबाट भित्र छिर्न नपाउदै श्रीमतीले भनीछिन....... श्रीमती:- कहाँ जानू भएको थियो ? मैले हजुरको अफिसमा पनि फोन गरि सोधे । हजुर त आज अफिसपनि जानू भएन रे ! के हो यस्तो चाला ? अनि यो हातमा भएको झोला कस्तो गनाई रहेको ..
काठमाडौँ, १३ जेठ हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मन पर्छ त कसैलाई नुनिलो । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यौनिक ब्यवहार फरक हुनुको कारण राशि हो । मेष राशिका मान्छे छिट्टै आवेशमा मेष राशिका मानिसमा कामुकता अत्याधिक हुन्छ । तर लामो समयसम्म..
नामको पहिलो अक्षरबाट थाहा पाउनुस् जीवनको गोप्य कुरा, तपाई को हो चिन्नुहोस् !
एजेन्सी, १० जेठ । हाम्रो जिन्दगीमा नामले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । तपाईंको नामले तपाईंको व्यक्तित्वलाई परिभाषित गर्ने गर्दछ । कहिले काँही त तपाईंको नामले तपाईंको भाग्यलाई प्रतिबिम्बित समेत गर्ने गर्दछ । नामले निकै प्रभावशाली ढङ्गले तपाईंको व्यक्तित्वलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ । तपाईंको नामको पहिलो अक्षरले बताउँछ कि तपाईं कुन प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो जिन्दगीमा के – कस्ता कुराको सामना गर्नसक्नुहुन्छ..
एजेन्सी, ८ जेठ । फेसबुक अहिले लभ अफेयर चलाउने एउटा गतिलो साधन बनेका छन् । तर, फेसबुकले पिरतीमात्रै गाँस्दैन, पिरतीमा संकट ल्याउन समेत बेर लाग्दैन । कुवेतमा फेसबुकका कारण यस्तो एउटा रोचक घटना भएको छ, जसले पारिवारिक जीवन नै संकटमा पुगेको छ । कुवेत निवासी एक व्यक्तिलाई युवतीको फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आयो । उनले हत्त न पत्त स्वीकार पनि गरे । दुवैबीच लामो..
सिन्धुपाल्चोक, ७ जेठ सुनकोशी गाउँँपालिका ६ टिमुरेको कोल्दोङदेवी माविका शिक्षकले विद्यालयमा नै विद्यार्थीको कपाल नै काटिदिन थालेका छन् । गाउँमा कपाल काट्ने मान्छे नहुँदा विद्यार्थीहरु कपाल काट्न शहर जानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसै कारण कोल्दोङ देवी माविले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कपाल काट्ने तालिम नै सञ्चालन गरेको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सहयोगमा कोल्दोङ देवी माविले जिल्लाका विद्यालयमध्ये यसरी..
एजेन्सी, ७ जेठ । फेसबुकमा भाईरल भैरहेको फोटोमा कारलाई पुरै गोबरले लिपेको देख्न सकिन्छ । भारतको अहमदाबादमा गर्मीबाट बच्न कारलाई गाइको गोबरले लिपेका छन् । ४५ डिग्री भन्दा माथिको गर्मीबाट बच्न कारलाई गोबरले लिपिएको हो । गाउँमा घरको भित्ता र जमिनलाई गोबरले लिप्ने चलन रहेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ता रुपेश गौरंग दासले उक्त गाडीको फोटो फेसबुकमा राख्दै लेखेका छन् ‘ मैले देखेको गोबरको सबैभन्दा..
लण्डन, ७ बैशाख । लन्डनमा रहेको एक अधिकारवादी समूहले प्रकाशित गरेको ताजा विवरण अनुसार हजारौँ उत्तर कोरियाली महिला तथा बालिकाहरूलाई चीनमा यौन व्यवसायमा सामेल हुन बाध्य पारिएको छ। लन्डनस्थित कोरिया फ्युचर इनिसियटिभ नामक समूहका अनुसार उत्तर कोरियालीहरूलाई अपहरण गरिन्थ्यो र यौनकर्मीका रूपमा बेचिन्थ्यो वा चिनियाँ पुरुषसँग बिहे गर्न बाध्य पारिन्थ्यो। कारोबार आफ्नो प्रतिवेदन पीडितहरूबाट सङ्कलन गरिएका विवरणमा आधारित भएको बताउने समूहले उक्त बेचबिखनको कारोबार..
पाँचथर, ६ जेठ । फिदिम नगरपालिका–१४ स्थित महादेव गुप्तेश्वर माविका शिक्षक लालबहादुर फागोको विद्यालयमा आफ्नो स्वागतका लागि राखिएको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा मृत्यु भएको छ । विद्यालयका शिक्षक अशोक तिम्सिनाको बिदाइ तथा नवनियुक्त शिक्षक फागोको स्वागतका लागि आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो । मन्तव्य राखिसक्ने बित्तिक्कै शिक्षक फागो बेहोस भएर ढल्नुभएको थियो । फिदिम–११ मूलडाँडा स्थायी घर भएका ३५..
डडेल्धुरा, ६ जेठ । डडेल्धुराका सामुदायिक वनमा आगो लाग्नेक्रम शुरु भएको छ । सुक्खायाम र गर्मी बढेसँगै जिल्लाका करीब दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक र सल्लेरी वनमा आगो लाग्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका त्रिशूल, असुर्पा, अजयमेरु, भद्रपुर र कैलपालमाण्डौँका सामुदायिक वनमा र अमरगढी नगरपालिका– १० राई बस्ती नजिकको वनका साथै महाभारत र चुरे वन क्षेत्रमा समेत आगो लाग्ने गरेको छ..
रोल्पा, ६ जेठ “दुई वर्षसम्म फोनबाट माया पिरती गाँसियो, जात भात पनि मिल्ने समाजले राम्रै ठान्ला भनेर वैवाहिक जीवनमा बाँधियो, मनले मन पराएर विवाह गरियो अहिले आएर धोका होला भन्ने के थाहा”, रोल्पा नगरपालिका–१ कालापानीकी गङ्गा कवरले रुँदै भन्नुभयो । सोही नगरपालिका–२ निवासी हुकुम कवर सँग २०७५ साल असारमा प्रेम विवाह गरेकी कवरले जीवनमा धोका खाइएला भन्ने कहिले सोच्नु भएन । “हामीले..
बेत्रावती, ५ जेठ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–८ थानसिंह निवासी एक सय सत्र वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक बाटुली लामिछानेलाई मासिक रु दश हजार उपलब्ध गराइने भएको छ । विसं १९५९ चैत १० गते जन्मिनुभएका लामिछानेको स्याहारसुसार तथा उहाँको जीवनका अनुभवको पुस्ता हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउन गाउँपालिकाले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले बाटुली लामिछाने (बाला) फाउण्डेशन..
एजेन्सी, ५ जेठ । जापानको एक कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई पूरा निन्द्रा सुत्नका लागि पैसा दिने गर्दछ । क्रेजी इंक नामक उक्त कम्पनीले आफ्ना सबै कर्मचारीका लागि पूरा निद्रा सुत्नका लागि समेत पैसा दिने गरेको हो । कर्मचारीले सबै कर्मचारीलाई नम्बर दिन्छ । सोही नम्बर अनुसार जो कर्मचारी हप्तामा पाँच दिन हरेक रात कम्तीमा ६ घण्टा सुत्दछन् उनीहरुले हरेक..
काठमाडौँ, ३ जेठ । त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका करीब ६०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न महत्वपूर्ण मानिएको त्रिशूली थ्री बी हव सवस्टेशन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेको छ । केही स्थानीयले विभिन्न माग राखी दुई दिनदेखि गरेको अवरोध शुक्रबारदेखि हटेको र निर्माण शुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सो सबस्टेशनको क्षमता २२० केभी रहेको छ ।..
काठमाडौं, ३ जेठ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका मुसाका अगाडि निरीह देखिएको छ । राजधानी वाशिङटन डीसीमा सबैतिर मुसा देखिन्छन् । मुसाहरू वाशिङटन शहरका गल्लीमा घुम्दै खानाको खोजमा फोहरका भाँडामा जम्मा भएका देखिन्छन् । डीसीमा औसत हरेक पाँच फीटको दूरीमा एउटा मुसा भेटिन्छ । हुँदाहुँदा मुसा ह्वाइट हाउस पनि पुगिसकेका छन् । एक निजी समाचार च्यानलका संवाददाताले ह्वाइट हाउस लनमा मुसा भेटे । उनले..
काठमाडौँ, २ जेठ इञ्जिनीयरको नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली हुन्छ भन्ने पत्याउन आम मानिसलाई गाह्रो पर्छ । आमजनतालाई पत्याउन गाह्रो परेजस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा इञ्जिनीयरकै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको तथ्य फेला परेको हो । बूढीगङ्गा गाउँपालिकाको कार्यालय हात्तीमुढा, मोरङका इञ्जिनीयर चन्द्रनारायण चौधरीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पाइएको आयोगले आरोप लगाएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार इञ्जिनीयर..
Results 604: You are at page9of 21